ရေနံစုပ်စက်, maxon မော်တာ, ဘွိုင်လာ, လျှပ်ကူးပစ္စည်း, မီးလျှံသည်မျက်စိအဆို့ရှင်, တူရိယာ, solenoid valve, တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အခြားအပိုပစ္စည်းများအတွက် nozzle: တရုတ်-သမုဒ္ဒရာအဏ္ဏဝါကဲ့သို့သောဘွိုင်လာအားလပ်ချိန်မှာအစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်တရုတ် - သမုဒ္ဒရာရေကြောင်းပိုင်သိုလှောင်စက်များအများအပြားရှိသည်။ စစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူအပိုပစ္စည်းများသည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောတန်ဖိုးရှိများမှာ!
Burner Stock စာရင်း:
TYPE ဘို့က NAME & သင့်လျော်သော
AALBORG KBO-E30 က M-II ကို
Rating: 1064–3170KW စာနယ်ဇင်း (MIN / MAX): ၂၅ BAR / ၃၀ ဘားဆီ (MIN / MAX): ၉၅ ကီလိုဂရမ် / နာရီ / ၂၈၃ ကီလိုဂရမ် / နာရီ IP44 220V 60HZ 2012
OILON RP-130 M ကို
စွမ်းဆောင်ရည်ရေနံ: 34-121kg / ဇရေနံအရည်အသွေးကို: Max 600 CST + 50 ℃ 220V 1 * 60Hz 6A 440V3* 60Hz 10.9kW IP44 2012
ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ / အဆင့်သတ်မှတ်ချက် - SPDT / 250VAC, 5A MAX.PRESS./TEMP: ၁၆ ကီလိုဂရမ် / စင်တီမီတာ ၂၅၀ ℃ပူးတွဲမှု - IP56
C.TO ကို C: 630MM MAX.PRESS./TEMP: 16kg / cm2 250 ℃
ဘွိုင်လာ Pump စတော့အိတ်များစာရင်း:
ပစ္စည်းများ: PP / FPM MAX: 2.3L / H BEI: 8BAR MAX: 1.9L / H BEI: 16BAR IP: 65 AC: 110-240V 50 / 60HZ 21W 28237 BREMEN GERMANY P / N: 10211074 S / N: 102M0006153 Made in ဂျာမနီ 2/2015
MGO ထောက်ပံ့ရေး pump
380MM2/ S က
AUX ။ BIILER FO pump
၄.၅ / ၆
MS711-4 （MOTOR အမျိုးအစား）
T0710403 （MOTOR အမျိုးအစား）
MS712-4 (MOTOR TYPE)
Shin MB ကို MB 04 04S
ဘွိုင်လာအပိုပစ္စည်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ပါပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်နိုင်သည်။ စစ်မှန်သောအစိတ်အပိုင်းများအရည်အသွေးနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းကိရိယာများသည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ထိုက်တန်သည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် DIESEL အထွေထွေအစုံများ၊ တာဘိုကာ၊ လေဖိအား၊ ရေကြောင်း၊ ရေငုပ်သင်္ဘော၊ အပူပေးစက်များ၊ BILGE SEPARATOR၊ လေအေးပေးစက်၊ လေအေးပေးစက် compressor UNIT & PROV.REF.COMP.IT. HYDRAULIC PUMP UNIT, HYDROPHORE PUMP UNIT, SEPARATOR CONTROL UNIT, HORN, ဘွိုင်လာအပိုပစ္စည်းများနှင့်အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွင် LR， DNV နှင့် KR စသည့်အမျိုးမျိုးသောအဏ္ဏဝါဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောလူ့အဖွဲ့အစည်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ဖြင့်ပေးနိုင်ပါသည်။
Sino-Ocean Marine သည်83ရိယာ ၈၃ acကကျယ်ဝန်းပြီးရုံးခန်းအကျယ်အ ၀ န်း ၈၀၀၀ နှင့်စတုရန်းမီတာ ၂၄၀၀၀ ကျယ်ဝန်းသည်။ စုစုပေါင်းစာရင်း၏အလေးချိန်မှာ ၈၀၀၀ တန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာရှရှိအကြီးမားဆုံးနှင့်အပြည့်စုံဆုံးအဏ္ဏဝါအပိုပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရေးစင်တာဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးကတည်းကကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအဓိကအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်လက်အောက်ခံစက်ရုံများနှင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝယ်ယူမှုရင်းမြစ်၊ တည်ငြိမ်သောအရည်အသွေးနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းတို့ကြောင့်ကျော်ကြားသည်။
ရှေ့သို့ Sewege ကုသမှုစက်ရုံ
ME LO auto filter